Ọrụ anyị arụela ọtụtụ ọrụ ebube
CMOAPI nwere ike ịnye ọrụ ndị a, nke iwu anyị siri ike na nchekwa ikike ọgụgụ isi (IP), na-ahụ na arụnyere ọrụ na ntụkwasị obi siri ike n'oge niile. Sistemụ ụzọ mmepe usoro njikarịcha usoro site na gram ruo na Mkpokọta Tricric Tricos ma ọ bụrụ na achọrọ Nkwado zuru oke gụnyere HPLC, GC-MS na NMR FTE maka ngwaahịa ebe usoro nrụpụta dị adị, CMOAPI nwere ike ịnye ọrụ nkwekọrịta na ọnụahịa maka nkọwapụta nke ndị ahịa. Na mgbakwunye na ọrụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu, anyị na-enyekwa ọkachamara maka ọrụ nke imepụta ihe (nke anaghị akwụ ụgwọ ọ bụla) iji hụ na, ebe ọ bụla enwere ike, anyị na-eji naanị isi mmalite nke ihe dị elu n'ahịa ahịa asọmpi. CMOAPI nwekwara ike ịnye nyocha omenala na ọrụ mmepe ahaziri ahaziri ndị ahịa chọrọ. Anyị nwere ezigbo egwu ndekọ nke idozi nsogbu ịma aka nke njikọta ihe dị egwu maka ndị ahịa anyị yana ọrụ nwere ike ịdabere na nha anya zuru oke (FTE) ma ọ bụ ọnụego ụbọchị. Kpọtụrụ anyị ka anyị mata otu ndị R&D ndị nwere amamihe ga-esi rụọ ọrụ na-esote maka ọganiihu anyị kachasị ọhụrụ.
N'ime afọ iri gara aga, CMOAPI anọwo na-enye njikọ omenala na ọrụ nrụpụta pụrụ iche. Ogo ọrụ anyị nwere ike isite na obere batị nke milligram rue ọtụtụ ọrụ nrụpụta oke. Imirikiti ndị ahịa anyị nọ na North America, Europe, Aisa, gụnyere Pfizer, lilly, roche, GSK, MSD, bayer na ụlọ ọrụ ndị ọzọ a ma ama. A na-arụzi ọrụ arụmọrụ anyị na ngwaahịa anyị niile n'okpuru ọnọdụ nke nzuzo nzuzo. Ndi otu chemist di elu ma ghaara ndi mmadu n’adabere na ha nke na akwado ya. Na-arụ ọrụ na ndị nrụgide nwere oke okpomọkụ site na -100˚C ruo 300˚C, yana akpịrịkpa sitere na 5L ruo 5000L, a na-enyefe ndị ahịa uru site na ntinye ọnụ ụlọ nke arụmọrụ etiti na-arụ ọrụ (ruo ọnụ ọgụgụ metric ton) ọgwụ ọgwụ. A na-emeputa mmeputa n'ime ebe anyi na-ere ahia. Anyị na-ahazi usoro nnweta maka onwu kemịkal iji zute ihe nrụpụta ọrụ gị nke ọma na ọsọ na ọnụ ahịa ka ị na-ezute ụkpụrụ kachasị elu nke nchekwa usoro na ntinye usoro. Usoro kachasị mma nke mmepụta ihe na-enye ohere maka nha nha na-agbanwe agbanwe na mma ngwaahịa. Emebere usoro niile iji mezuo usoro nchịkwa siri ike.
CMOAPI maka Nchọpụta Ọgwụ bụ igwe ojii, usoro ọgụgụ isi na-enyocha ihe ọmụma sayensị na data iji kpughee njikọ ndị ama ama na nke zoro ezo nwere ike inyere aka nwekwuo ike na nzụlite sayensị. Ikpo okwu a na-enye ndị nchọpụta ohere iwepụta echiche ọhụrụ site n'enyemaka nke visualizations dị ike, amụma na-akwadosi na nhazi asụsụ e zụrụ azụ na ngalaba sayensị. CMOAPI maka Nchọpụta Ọgwụ nwere ike mee ngwangwa njirimara ndị na-achọ ọgwụ ọgwụ na atụmatụ ọgwụ ọhụụ site na njigide ike nke nnukwu data.
Ndị otu anyị na-ahụ maka mmepe kemịkalụ, nke nwere ihe karịrị ndị sayensị 50 n'obodo anyị, karịrị atụmanya dị iche iche ọbụlagodi n'ọrụ ndị kacha sie ike. N’ịrụ ọrụ n’ụlọ nyocha nke akụrụngwa nke nwere usoro ọgbara ọhụrụ na ụdị nyocha, anyị na-arụ ọrụ ụzọ nke ọma, mmepe usoro ngwa ngwa, njikarịkwa ọnọdụ mmeghachi omume maka ọnụ ọgụgụ nke maka ọnwụnwa ma ọ bụ n’ichepụta ihe dị ukwuu. Site na nkwado nke ndị otu ọkachamara nke ndị nyocha, injin kemịkalụ na ndị ọkachamara QA, anyị na-etolite usoro n'ichepụta nke ọma iji gboo mkpa gị.